Naharitra ora vitsivitsy vao tafavoaka ireo razana: mpanao lalana roa maty tototry ny tany, telo hafa naratra | NewsMada
Par Taratra sur 12/10/2020
Nihotsaka tampoka ny faritry ny toerana niasan’izy ireo, ka maty tototry ny tany vokatr’izany ireto mpiasa mpanao lalana roalahy tany Ankazondandy (RN 3). Nisy telo hafa kosa avotra ihany saingy naratra mafy, ankoatra ny lehilahy iray main’ny taribin-jiro
Tsy mampilaza ny loza. Lehilahy roa 20 sy 22 taona indray namoy ny ainy, ny asabotsy hariva teo tao Fieferana-Ankazondandy, distrikan’i Manjakandriana. Maty nihotsahan’ny tany ireo mpiasan’ny orinasa tsy miankina iray manodidina ny tamin’ny 05 ora latsaka fahefany. Naman’ireo tra-doza telo hafa kosa naratra tamin’izany, olona iray hafa ihany koa main’ny herinaratra ka tsy nahatsiaro tena. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa mpanao lalana ireo niasa teny an-toerana, manodidina ny 10 eo ny vatan-dehilahy nanao izany, hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana. « Nangady tany izy ireo tamin’io fotoana io ary tsy lavitra teo, nisy andrin-jiron’ny Jirama izay tsy tokony hokitihina », hoy ny zandary. Mbola nangady ny tany anefa ireo mpiasa teny an-toerana. Vokany, nianjera tampoka ilay andrin-jiro ka niteraka fihotsahan’ny tany. Tototra teo no ho eo ny dimy lahy tamin’izany. Taorian’izay, nifanome tanana ny fokonolona sy ny zandary ary ireo tompon’andraikitra samihafa teo an-toerana tamin’ny fitadiavana ireo tra-doza. 30 minitra taorian’izay, tafavoaka ny vata-mangatsiaka iray voalohany. Raha naharitra ora iray kosa ny fahitana ny faharoa hafa. Izay tsy hita raha tsy efa maizina ny andro, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Tsy nahatsiaro tena
Nandritra izay, lehilahy telo hafa naratra. Voalaza kosa fa naratra mafy ny iray tamin’izy ireo ary efa nalefa vonjimaika eny amin’ny HJRA avokoa. Tamin’ireo fokonolona nitangorona kosa, nisy lehilahy iray nahitsaka taribin’ilay andrin-jiro ka main’ny herinaratra ary tsy nahatsiaro tena vokatr’izay. « Ireny tariby mitondra herinaratra mahery vaika ireny mihitsy ilay voahitsany tamin’io fotoana io », hoy hatrany ny zandary. Taorian’ny famonjena azy, velona soa aman-tsara ralehilahy ka tsy hatahorana ny ainy.
Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola nitohy ny asa teny an-toerana. Ireo vata-mangatsiaka kosa efa any amin’ny fianakaviany avy.